November 9, 2021 - ApannPyay Media
November 9, 2021 by ApannPyay Media
သင်သတိမထားမိတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်း (၁၉) ခုရဲ့ သက်တမ်းများ တချို့သော အရာတွေကို ဘယ်တော့မှ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သင်တွေးချင် တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အရာအားလုံးဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပျက်စီးရမှာပါပဲ။ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ခေါင်းဖြီးတွေ၊ တခြားအရာတွေက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မရှိဘူးလို့ သင်ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကို သင်က ကျိုးတဲ့ပျက်တဲ့အထိ သုံးနေမှာပါပဲ။ သုံးလို့ အဆင်မပြေမှသာ လွှင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ သက်တမ်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ခေါင်းအုံး ( ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိ) သင်ငယ်ငယ်က သုံးခဲ့တဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို အခုအချိန်မှာ သုံးလို့ အဆင်မပြေနိုင်တော့သလို ပြန်ရှာတွေ့ဖို့ကလည်း မလွယ်တော့ပါဘူး။ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သင်အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။ လည်ပင်းနာတာတွေ၊ ဓာတ်မတည့်တာတွေပါ … Read more
သင်က ညဘက်အိပ်ရင် ဖက်စရာတစ်ခုခု ရှိမှ အိပ်ပျော်တတ်သူလား
သင်က ညဘက်အိပ်ရင် ဖက်စရာတစ်ခုခု ရှိမှ အိပ်ပျော်တတ်သူလား သင်က ညဘက်အိပ်ရင် ဖက်စရာတစ်ခုခု ရှိမှ အိပ်ပျော်တတ်သူလား ဒါဆိုရင် ဖတ်လိုက်တော့ ညဘက်မှာ တစ်ခုခု ဖက်စရာမှ ဘေးမှာ မရှိရင် အိပ်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ သူတွေကို တွေ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်က လည်း ဖက်စရာတစ်ခုခုကို အိပ်ခါနီးတိုင်း လိုအပ်နေတတ်သူလား။ အိပ်ရာမှ ဖက်စရာ တစ်ခုခုရှိမှ အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဒီအကြောင်းပြချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်နှင့် တိုက်ဆိုင်လားဆိုတာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။ ၁။အထီးကျန်ခြင်းမုန်းတီးသူ ညဘက်မှာတစ်စုံတစ်ခုကို ဖက်အိပ်ရခြင်းကို သဘောကျတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် ကတော့ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြပါတယ်။ဖက်ခေါင်းအုံးပဲဖြစ်ဖြစ် အရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖက်ရတဲ့ အခါမှာ ရတဲ့ ခံစားချက်က ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဖက်ရတဲ့ အခါမှာ ခံစားရသလို … Read more
အဝေးသင်ကျောင်းအပ် လက်ခံမည့်ရက် ၁ လနီးပါး ထပ်တိုးရပြန်ပြီ
အဝေးသင်ကျောင်းအပ် လက်ခံမည့်ရက် ၁ လနီးပါး ထပ်တိုးရပြန်ပြီ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ ဘာသာတွဲ အထူးပြုဖြင့် အဝေးသင်တက်မည့်သူများအား ကျောင်းအပ် လက်ခံမည့်ရက်ကို ၁ လနီးပါး သက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း စစ်ကောင်စီလက် အောက်ခံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ကြေညာသည်။ ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းအပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း နောက်ဆုံးရက်ကို နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်ဟု သတ်မှတ်ထားရာမှ ဒီဇင် ဘာလ ၅ ရက်အဖြစ် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြ သည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အဝေးသင်ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက် တိုးမြှင့်လိုက်ရသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် … Read more
အင်းဝ မှာ “ရေ” ၊ မြေ မှာ “ပဲခူး” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအဓိပ္ပာယ် နှင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံ အင်းဝမှာရေ – အင်းဝမှာ ရေ ၊ မြေမှာ ပဲခူး ဟူသော စကားကို ရှေးလူကြီးများမှ တစ်ဆင့် ကြားဖူးကောင်း ကြားဖူးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရခြင်းမှာ အင်းဝသည် ရေကြီးခြင်း ၊မိုးခေါင်ခြင်း စသည့် ရေနှင့် ပတ်သတ်သော ဒုက္ခများကြောင့် မြို့ပါ ပျက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုလို့ရသော ကြောင့် ပင်။ သက္ကရာဇ် ၁၇၄၁ ခုနှစ် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိ လက် ထက်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် အဖြစ်များဖြစ်သည်။ ထိုမင်းသည် မင်းဆိုးဟု မဆိုထိုက်သော်လည်း မင်းကောင်း မင်းမြတ်ဟု လည်း မဆိုထိုက်ပြန်။ တိုင်းပြည်ရေးကို သိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့။နန်းတက်သည့် နှစ်အ … Read more
အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမခံစားချက်တွေကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး
အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမခံစားချက်တွေကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အနုပညာလောက မှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်း များစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ် ဆော င် နိုင်တဲ့ အတွက် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးဖွေးဖွေးဟာဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ‌အောင်မြင်လာ ခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပါပဲနော်။ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေ တွေ မှာဆိုရင် လည်းဖွေးဖွေးကပြည်သူလူထုနဲ့ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပု ဒ် မ ၅၀၅(က)နဲ့ ဝရမ်းခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ကျွန်မကတိတည်ခဲ့ပါတယ်နော် ၊ဖွေးရွေးချယ်မှု တိုင်းကိုSupportလုပ်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ သူတွေကိုလဲကျေးဇူး ဆပ် ချင်လှပါပြီ။ သူများတွေတချို့ပုံမှန်တကယ်ပြန်ဖြစ်နေသလို လိုပျော်ပါး နေတာတွေအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်နေတာတွေ ကြည့်မိရင်လဲ အ တွေးတွေကို အဲ့မှာပဲရပ်လိုက်ပါ၊ အတွေးထဲစိတ်ထဲက သူတို့ကိုလွှတ်ထားလိုက်ပါ။ … Read more
ဆုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့အကြွေးကိုတောင် ပြန်ရစေတဲ့ အကြွေးတောင်းနည်း အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရအောင် ကြက်ဥလေးနဲ့ အကြွေးဒီလိုတောင်းပါ ကြက်ဥလေးနဲ့ကြွေးတောင်းမယ် အကြွေးမြန်မြန်ပြန်ရစေမည့် ထိရောက်စေသောနည်း ကြက်ဥတစ်လုံးပေါ်တွင် ခဲတံဖြင့် အကြွေးလို့ရေးပါ။ ထိုကြက်ဥထောင်မတ်စေရန် တစ်ခုခုပေါ်တင်ပါ။ ထိုကြက်ဥပေါ်ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်မီးထွန်းပြီးလျှင် ××××ဆီမှ အကြွေးငွေ ××××ကျပ်အမြန်ပြန်ရပါစေဟု …. လေးလေးနက်နက်…ဆုတောင်းပေးပါ။ အကြွေးများလျင် ၊အတောင်းရခက်သောသူဖြစ်လျင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြက်ဥပေါ်မီးထွန်းပြီး ဆုတောင်းပေးပါ။ ဗေဒင်ယတြာများကို ဖတ်ရှု့လေ့လာကြသူများလည်း သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာများ အားလုံးကို… အစဉ်ဦးညွှတ်ကန်တော့လျက်… ဆရာမဇာဇာ 09762011321 အကြွေးနွံထဲက မြန်မြန် ရုန်းထွက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) သွယ် အကြွေးတင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာ တော်တေ်ာလေး စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အကြွေးတင်သွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကို သေသေချာချာကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲပြီး စည်းကမ်းရှိရှိသုံးစွဲရင်းနဲ့ ပြန်ဆပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုးတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။ အကြွေးပြန်ပြန်ဆပ်နေရတာနဲ့ … Read more
ရွှေနဲ့ဒေါ်လာ ရေရှည် ဘယ်ဟာ စုဆောင်း မြှုပ်နှံသင့်လဲ?
ရွှေနဲ့ဒေါ်လာ ရေရှည် ဘယ်ဟာ စုဆောင်း မြှုပ်နှံသင့်လဲ? 09 November, 2021၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် အင်္ဂါနေ့ ရွှေဈေးငွေဈေး ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းသည် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာကျပ် 1920~1950 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ရန်ကုန် စျေးကွက်အတွင်း အခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးများလဲလှယ်မှု နှုန်းထားများမှာ ယူရို 2080 ကျပ်၊ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ 1360 ကျပ်၊ မလေးရှား ရင်းဂစ် 435 ကျပ်၊ ထိုင်း ဘတ် 56.5 ကျပ်၊ ဂျပန် ယန်း 16 ကျပ် တရုတ် ယွမ် 300 ကျပ်၊ အိန္ဒိယ ရူပီ 26 ကျပ် ဩစတေးလျ … Read more
အသားအရေ ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ၃ ခု
အသားအရေ ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ၃ ခု နေရောင်ထိတွေ့မှုများတာကြောင့် နဂိုအသားလေးဖြူနေရာကနေ အသားလေးညိုမည်းသွားလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် ဈေးကွက်ထဲမှာရတဲ့ အသားဖြူ ခရင်မ်တွေမသုံးရဲလို့ သဘာဝအသားဖြူတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမှ သိချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် နည်းလမ်း ၃ သွယ်ကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်။ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီး သံပုယိုသီး ရှာရခက်ရင် သံပုရာသီး သုံးလို့ရပါတယ်နော်။ ဗီတာမင် C ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကိုသန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး အမည်းစက်တွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကိုအရည်ညှစ်ပြီး ဝါဂွမ်းစနဲ့ နစ်ယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင်မျက်နှာပေါ်မှ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်အောင်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့မျက်နှာသစ်ပါ။ ပျားရည် ပျားရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ Antibacterial ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေဟာ အသားအရေကိုစိုပြေစေပြီး ညိုမည်းနေတဲ့အသားအရေ ပျက်ဆီးနေတဲ့အသည်းအရေတွေ အမာရွတ်တွေ … Read more
တချိန်လုံး လှူခဲ့တာတွေကို ဒီသီချင်းလေး တပုဒ်ကြောင့် ပျောက်ပျက်သွားရမှာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ မမဆောင်း
တချိန်လုံး လှူခဲ့တာတွေကို ဒီသီချင်းလေး တပုဒ်ကြောင့် ပျောက်ပျက်သွားရမှာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ မမဆောင်း ဪ လူ့ဘဝ လူ့ဘဝ ဖေ့ဘုတ် သုံးဒါ ၇နှစ်တာ အတွင်း လိုင်းပေါ်မှာ ဘာစာတွေမှ တခါမှ ရေးလေ့ရေးထ မရှိပါဘူးနော့။မမဆောင်း ဒီနေ့ Shooting ရှိဒါ ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ အာ့ဒါက ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ကို စကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ပါ MRTV မှာ အဆိုတော် Vဟေကို နေမကောင်းလို့ အစီစဉ် မရှိပဲ ဒီလိုဒီလို လှလို့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့သီချင်း စာသားတောင် မရပဲ သရုပ်ဆောင်ပေးဖြစ်ဒါပါ။ ချစ်တဲ့သူတွေ က စသလိုနောက်သလိုပဲ သီချင်း Post တွေ ကို တင်ထားဒါတွေ တွေ့ပါတယ်နော့ မမဆောင်းကို အမြဲချစ်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးသားပါတချို့ … Read more
ထမင်း ဟင်း မစားပဲ ကန်စွန်းဥဖြင့် ဝိတ်ချနည်း
ထမင်း ဟင်း မစားပဲ ကန်စွန်းဥဖြင့် ဝိတ်ချနည်း အထူးသဖြင့်ဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။၅လက်မအရွယ်အနေတော်ကန်စွန်းဥတစ်လုံးမှာ ကယ်လိုရီ၁၂ဝလောက်အကြမ်းဖျင်းပါပါတယ်။ အဓိကကတောကန်စွန်းဥကအမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အတွက်နှစ်လုံးလောက်စားလိုက်တာနဲ့ဗိုက်ထဲမှာနေရာတော်တော်ယူနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ထမင်းတနပ်ကို မြန်မာပာင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့စားလိုက်ရင်ပဲကယ်လိုရီ၄ဝဝကျော် ၅ဝဝက အသာလေးဖြစ်နေပါပြီ ဒါကြောင့် သူ့ထက်ကယ်လိုရီတဝက်နီးပါးနည်းတဲ့ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ကန်စွန်းဥနှစ်လုံးလောက်ကမလိုအပ်တဲ့အဆီဓါတ် နဲ့ သွေးတွင်းရှိကိုလက်စထရော(Cholesterol)ကိုပါကျစေပါတယ်။ ဆီးချိုသမားနဲ့ကောတည့်ရဲ့လားကန်စွန်းဥကဆီးချိုသမားများအတွက်ပမာဏထိန်းစားမယ်ဆိုရင်သင့်တော်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပါ။ အရသာချိုပေမယ့်ရိုးရိုးအာလူးနဲ့ယှဉ်ရင်Glycemic Indexလို့ခေါ်တဲ့အစာစားပြီးတက်တဲ့သကြားဓါတ်နည်းတဲ့ အတွက် ဆီးချိုသမားများ လည်းစားလို့ရပါတယ်။ ပြုတ်စားတာကဖုတ်စားတာထက်စာရင်သကြားထက်ပိုနည်းစေတဲ့အတွက်ဆီးချိုသမားများအနေနဲ့ကန်စွန်းဥပြုတ်စားတာပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ်ကန်စွန်းဥရဲ့ကောင်းတဲ့အချက် ကတော့ Anthocyaninပါတဲ့အတွက်ရောင်ယမ်းတာကို (anti inflammatory action)သက်သာစေပါတယ်။ ထို့အပြင်ကန်စွန်းဥမှာဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်(Antioxidant)သတ္တိရှိတဲ့ဗီတာမင်A နဲ့Cတို့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းတဖက်တလမ်းကကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Magnesium(မဂ္ဂနီစီယမ်)ဓါတ်လည်းပါဝင်တဲ့ အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု့များတဲ့လူတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်တယ်လို့တစ်ချို့အာပာာရဆိုင်ရာဂျာနယ်များကလည်းဖော်ပြပါထားပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် ဒေါက်တာ ညီညီကျော် ထမင္း ဟင္း မစားပဲ ကန္စြန္းဥျဖင့္ ဝိတ္ခ်နည္း အထူးသျဖင့္ဝိတ္ခ်တဲ့ေနရာမွာေတာ္ေတာ္ေလးအသုံးဝင္ပါတယ္။၅လက္မအ႐ြယ္အေနေတာ္ကန္စြန္းဥတစ္လုံးမွာ ကယ္လိုရီ၁၂၀ေလာက္အၾကမ္းဖ်င္းပါပါတယ္။ အဓိကကေတာကန္စြန္းဥကအမွ်င္ဓါတ္မ်ားတဲ့ အတြက္ႏွစ္လုံးေလာက္စားလိုက္တာနဲ႔ဗိုက္ထဲမွာေနရာေတာ္ေတာ္ယူေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထမင္းတနပ္ကို ျမန္မာပာင္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔စားလိုက္ရင္ပဲကယ္လိုရီ၄၀ဝေက်ာ္ ၅၀၀က အသာေလးျဖစ္ေနပါၿပီ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ထက္ကယ္လိုရီတဝက္နီးပါးနည္းတဲ့ … Read more